बजारमा भाउ बढ्यो, नाकामा तरकारी सड्यो - Everest Dainik - News from Nepal
बजारमा भाउ बढ्यो, नाकामा तरकारी सड्यो
काठमाण्डौं, असार १३ । तरकारी र फलफूलको नमुना सुनौलीबाट बोकेर काठमाडौं ल्याइन्छ, प्रयोगशालामा परीक्षण गरिन्छ र रिपोर्ट फेरि नाकामा पुर्‍याइन्छ । कम्तीमा तीन दिनसम्म तराईको ४२ डिग्री तापक्रममा ट्रकमा खाँदिएका तरकारी र फलफूलको हालत के हुन्छ ? नाकामा प्रयोगशाला खोइ ?
विषादी परीक्षण नगरेको तरकारी र फलफूल आयातमा रोक, तर नाकामा न प्रयोगशाला छन् न कर्मचारी । विषादी परीक्षण नगरेका तरकारी र फलफूल आयातमा सरकारले रोक लगाएको छ । तर, नाकामा न प्रयोगशाला छन् न कर्मचारी । पछिल्लो एक सातामा तरकारी र फलफूल बोकेका १०३ ट्रक विभिन्न नाकामा रोकिएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस नेपाल-चीन सीमाबाट जंगेपिलर गायब
नाकामा रहेका तरकारीका केही कन्टेर भारततिरै फर्किएको उनले बताए । उनले भैरहवा, वीरगन्ज र काँकडभिट्टा नाकाबाट भित्रिन लागेका कन्टेनर फर्काएर करिब चार सय टन तरकारी भारतमै बिक्री गरेको बताए । व्यवसायीका अनुसार हाल भारतबाट आलु, प्याज, कागती, ठूलो गोलभेँडा, तितेकरेला, भेँडेखुर्सानी, काँक्रो, परबललगायत तरकारी आयात भएका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
ट्याग्स: Border, vegetables